I-China Escalator isebenzisa ifreyimu yokusekela yoxhaso nabaphakeli | I-Hongli
I-Escalator luhlobo lwemishini eqhubekayo egijimayo ebunjwe ngesixhumo se-chain sakhiwo esikhethekile nesihambisi sebhande lesakhiwo esikhethekile. Inezinzuzo eziningi ezifana nomthamo omkhulu wezinto zokuhamba, izisebenzi zokuhamba ngokuqhubekayo. Ngakho-ke isidingo sokuphepha siphakeme kunenye imishini. Isetshenziswa ikakhulukazi ezindaweni zomphakathi ezinokugeleza kwabantu okugxile, njengezitolo ezinkulu zezitolo, amakilabhu, iziteshi, izinkundla zezindiza kanye nama-wharfs.
Idrayivu enkulu inamandla eyanele nokuqina futhi izipikha ezihlukene zimiswa ngokuthembekile kushafeni. Bheka ukutholakala kwesici ezingxenyeni ezithambile zozimele. I-Sprocket isebenzisa insimbi ekhethekile ye-carbon, ngemuva kokulashwa okushisa, ubulukhuni bengaphansi bungamaphrojekthi angaphansi kwezitimela ngokuvamile adinga ukuqinisekisa impilo yokusebenza kwe-sprocket yeminyaka engaphezu kwengu-20. Ubude beketanga elihamba phambili lokushayela kufanele kube ngokulinganayo Uma uchungechunge oluphambili lokushayela luqinile kakhulu noma luxege kakhulu, induduzo yesihlalo sabagibeli iyothinteka, okungukuthi, inani lokuhamba likhuphuka lenyuka.
Ijubane lebhande le-handrail
Ijubane lokugijima kwebhande le-handrail lihlobene nesinyathelo futhi umehluko ovumelekile we-pedal ngu-0- + 2%.
Kungani ibhande le-handrail kumele lisheshe kune-pedal?
Okokuqala, amazinga angenhla adinga ukuthi ijubane lebhande le-handrail kumele libe likhulu noma lilingane ngejubane lezinyathelo nama-pedals. Isidingo esinjalo ukuvimbela ukubamba isandla ngesandla, ngeke ngoba ijubane lebhande le-handrail ngemuva kwejubane lesinyathelo noma i-pedal futhi kubangele umzimba womuntu ukuba wehle emuva futhi ube nengozi.
Ngemuva kwalokho abantu bangalimala kakhulu uma ehluleka emuva kunangesikhathi ehluleka phambili.
Isisetshenziswa sedrayivu yemoto yesitimela yaphansi
I-Escalator mkutano indawo yokusebenza yesithonjana 2